Nepal Dayari | राम्रो भन्दा नराम्रो कामको चर्चा गर्ने नेपाली समाज,हिलो खेलेकै भरमा क्षत्र शाहीलाई गा!लीगलौज गर्नु पर्ने किन ?(भिडियो)
राम्रो भन्दा नराम्रो कामको चर्चा गर्ने नेपाली समाज,हिलो खेलेकै भरमा क्षत्र शाहीलाई गा!लीगलौज गर्नु पर्ने किन ?(भिडियो)
असार १७, २०७८ बिहिबार १३२९ पटक हेरिएको
काठमाडौं-यो असारको महिना हो त्यो पनि अझै बिशेस दिन असार १५ गते। असार १५ गते इन्र्द्रेनीको टिम खेत रोप्न पुगेका छन्। यस महिना भरि मानिसहरुले धान रोपेर बर्षौ भरि खानपुग्ने गरि खेतीमा काम गरिरहेका हुन्छन। समयमै पानी परेका कारण मौसमको अनुकूलता र को रोना भा इरसले मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भएका कारण धान रोपाइँमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसैबीच रोपाइँ संगै रमाइलो गर्दै इन्द्रेणि परिवार सहित कृष्ण कंडेल पनि धान रोप्न र हिलो खेल्न खेतसम्म पुगेका छन् । रमाइला रमाइला गीत गाउदै इन्द्रेणि परिवारको आगमनसगै दोहोरि त हुनेनै भयो । एकदमै मीठो दोहोरि गायनसगै हिलो एकअर्कामाथि छ्याप्दै धान रोप्दै यो असार पन्ध्रलाई अझ बढि हर्ष उल्लासका साथ उक्त इन्द्रेणी परिवारले मनाएको हो । सो ठाउमा इन्द्रेणि परिवारसहित राजनैतिक नेताहरु र विभिन्न कलाकारहरुको पनि एकदमै बाक्लो उपस्थिति थियो ।
आज क्षत्र शाही मात्र नभएर तपाई हाम्रो पनि अभन्दामा यस्ता कार्य सृजना हुन् सक्छन त्यसैले यसलाई सचेत हुदै कसैको करिएर माथि आच आउने काम नगरौ र नगरौ । यहि बिषयलाई लिएर छत्र शाही यतिबेला लाईभमा आएर प्रस्ट पारेका छन् । ईन्द्रेणी टिमले तयार पारेको हेर्नुहोस यो भिडियो रिपोर्ट : डाफे खबर डटकम बाट